DOWNLOAD FSND Boeing 707-420 2013 FSX र P3D - Rikoooo
FSND Boeing 707-420 2013 FSX र P3D
डाउनलोड 50 999
04-07-2009 सिर्जना गरियो
05-02-2014 परिवर्तन गरियो
अपडेट 04 / 02 / 2014
सुन्दर हवाइजहाज! यहाँ पूर्ण Boeing 707 पखेटा र अन्य मोबाइल भागहरु जस्तै पूर्ण एनिमेशन छ। अनुकूलन ध्वनि, भर्चुअल ककपिट, 2D प्यानल र अझ थप समावेश!6repaints: एयर फ्रान्स, Amercian एयरलाइन्स, TWA, Varig, पान AM, Platano एयरलाइन्स। SP2 र Prepar3D - FSX उपयुक्त छ।
उच्च ग्राफिक्स गुणस्तर को मोडेल
तपाईं ऐलेजैंड्रो Rojas Lucena गर्न जाँच आफ्नो वेबसाइट, आफ्नो शिष्टाचार अनुमति लागि धन्यवाद http://www.simviation.com/fsnd/
FSND Boeing 707-420 2013 FSX र P3D डाउनलोड